M/weynaha Puntland oo caawa seexanaya Duleedka Garoowe & Kulamo halkaas ka socda.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hogaaminayo oo isugu jira labada Gole ee Dowladda, ayaa galabta lagu soo dhoweeyay degmada Dangoroyo ee Gobolka Nugaal. Wafdiga uu hogaaminayo Madaxweynaha Puntland waxaa banaanka hore […]
Farmaajo oo saacad iyo dheeraad ka dib ka laabtay Baladweyne, aana booqan Shacabka.
November 2, 2019 NEWS 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho, ka dib markii uu saacad joogay magaalada Baladweyne oo ay todobaadkan ka dhacday Fatahaad weyn oo saameyn xoog badan geysatay. Madaxweynaha Soomaaliya […]
DAAWO:Wararkii ugu dambeeyey Xiisadaha P/land, Qorshaha Cali Khaliif ee Muqdisho, Baladweyne & Warar kale
Garowe(P-TIMES)- Waxaan halkan idiinku soo gudbinaynaa daawayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, waxaana kamid ah dagaal culus oo ka dhacay deegaan kamid ah Shabellaha Dhexe, xiisada ka aloosan Baarlamaanka Puntland ee u dhaxaysa […]
DAAWO:Madaxweyne Farmaajo oo gaadhay magaalada Baladweyne
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa goor dhoweyd ka dagay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo ay kusoo dhoweeyeen madax ka tirsan […]
Madaxweyne Farmaajo oo kusii jeeda Baladweyne & Gaadiidkii ugu badnaa oo kusii qul qulaya magaalada
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku wajahan saacadaha soo socda magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay ka taagan tahay xaalad adag, kadib markii ay ku rogmadeen magaaladaasi fatahaado xoogan […]
Dagaal xoogan oo dhacay & Wasiirkii arimaha gudaha oo jidka loo galay kadib markii…
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa sheegaya in dagaal u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan Ahlu-Sunna Waljamaaca iyo dowladda federaalka uu goor dhaw ka dhacay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Wararku waxa […]
Ahlu Suna oo laga qabsaday labo magaalo oo muhiim ah & Ciidamada Xooga dalka oo ku sii jeeda Guriceel.
GURICEEL(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey oo aan ka helayno magaalada Dhuusa-Mareeb ayaa sheegaya in ay ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed la wareegen gacan ku heynta degmooyinka Matabaan iyo Ceeldheere oo katirsan gobalka Galguduud, goobahaas oo ay […]
DAAWO: Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo si adag uga hadlay go`aanka ay maanta qaateen.
GAROOWE(P-TIMES) – Gudoomiyaha golaha baarlamaanka Puntland CabiXakiim Maxamed Axmed (Dhoba-Daareed) oo maanta ka hadlayay kalfadhiga baarlamaanka ayaa sheegay in ujeedada ay u diideen go`aankii xeer Ilaalinta ay tahay in la ilaaliyo madax banaanida iyo shaqo […]
Baarlamaanka Puntland oo sharci darro ku sifeeyey go`aankii Xeer Ilaalinta Puntland ee ka dhan ahayd Xildhibaan Daad.
GAROOWE(P-TIMES) – Mudanayaasha baarlamanaka Puntland oo dood adag ka yeeshay warqadii laga soo saaray Xildhibaan Cawil Daad ee lagu codsanayay in laga qaado Xasaanada, ayaa sharci darro ku tilmaamay, waxayna afka ciida u dareen damacii […]
B. Puntland oo ku dhawaaqay In Xaafiiska Xeer Ilaaliyuhu jabiyey Dastuurka dalka, sharcina la geynayo.
GAROOWE(P-TIMES) – Baarlamaanka Puntland oo ay hadda ka socoto dood xoog leh ayaa looga hadlayaa warqadii kasoo baxay Xaafiiska Xeer Ilaaliyaha dawladda Puntland, kaas oo uu kaga hadlayo in xasaanada laga qaado Mudane baarlamaan oo […]
AKHRISO: Xeer Ilaalinta Puntland oo ku dhawaaqday war cusub oo kusaabsan Warqadii ay soo saartay.
GAROOWE(P-TIMES) – Xeer Ilaalinta Puntland ayaa soo saartay qoraal kale oo ay udirtay guddoonka baarlamaanka Puntland, taas oo ay kaga laabanayso dacwadii ay ku soogtay xildhibaan Cawil Xasan Daad oo 26-kii bishii hore su`aal weydiiyey […]
DAAWO: Saciid Deni oo ka hadlay waxay isku hayaan Madaxda DF Soomaaliya.
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Deni oo ka hadlayay magaalada Qardho ayaa sheegay in ay dawladda Faderaalka isku hayaan arrimo badan oo aysan isku heynin oo kaliya helida dhaqaale, balse wuxuu sheegay in arrimaha siyaasiga […]
DEG DEG: Dood adag oo ka socda gudaha baarlamaanka Puntland & Xeer Ilaalinta oo lagu dhagan yahay.
GAROOWE(P-TIMES)- Kalfadhiga baarlamaanka Puntland ee 45aad fadhigiisa 5aad ayaa hadda socda, kaas oo looga doodayo arrimaha ku saabsan soo jeedin katimi Xeer Ilaalinta Puntland oo ay ku dalbanaysay in xasaanada laga qaado mudane katirsan baarlamaanka […]
DEG DEG: Taliyihii ciidamada Booliska Somaliland oo geeriyooday & Kuxigeenadiisa Oo Isbitaalka la dhigay.
November 1, 2019 NEWS 1
HARGEYSA(P-TIMES – Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee caasumada Somaliland ayaa sheegaya in goor dhaw uu geeriyooday taliyihii ciidamada Booliska Somaliland Jeneraal, Cabdilaahi Fadal Iimaan, iyadoo sidaas oo kale labadiisii Kuxigeen Isbitaal la dhigay, […]
Madaxtooyada Puntland oo sheegtay in Xildhibaano codsadeen in dacwadii xildhibaan Daad lala laabto.
GAROWE(P-TIMES)- In ka badan 20 Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Dowladda Puntland ayaa kulan Kula qaatay Qardho Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, Xildhibaanadan oo saaka ka yimi Garoowe ayaa u sheegay Madaxweynaha in […]
XOG CUSUB: Maxaa ka soo baxay Kulan gaar ah oo ay xalay yeesheen Xildhibaanada G Mudug ugu jira baarlamaanka Puntland?
GAROOWE(P-TIMES) – Kulan saacado dheer qaatay oo ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee kasoo jeeda gobalka Mudug oo ahaa kii 2aad oo dhaca tan iyo Sabtidii markii Madaxweynaha Puntland ka carooday kalfadhiga baarlamaanka, ayaa aad […]
DAAWO: Soomaaliya & Turkiga oo kala saxiixday Heshiisyo waa weyn oo taariikhi ah.
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladdaha Soomaaliya & Turkiga ayaa kala saxiixday heshiisyo cusub oo iskaashi kuwaas oo saameyn ku yeelanaya hanaanka dhaqaalaha ee dalka Soomaaliya, sidda uu sheegay Wasiirka Qorsheynta & Iskaashiga caalamiga ah ee dalka Soomaaliya […]
AKHRISO: Maxaan ka naqaan Gudoomiyaha G. Barri ee xalay xilka la wareegay, Maxaase loo keenay waqtigan?
BOOSAASO(P-TIMES) – Gudoomiyaha cusub ee gobalka Barri Cabdisamad Abwaan ayaa xalay xilka kala wareegay Gudoomiyihii hore Mr, Dhedo oo hadda ku biiray golaha Wasiiradda ee Xukuumadda uu hogaamiyo Madaxweyne Siciid Deni, ka dib markii lagu […]
WAR CUSUB: Guddoonka baarlamaanka Puntland oo Warqadii Xeer Ilaalinta waji cusub u yeelay, kuna wareejiyey.
GAROOWE(P-TIMES)- Wararkii u dambeeyey oo aan ka helnay magaalada Garoowe, gaar ahaana dhanka baarlamaanka ayaa sheegaya in guddoonka baarlamaanka ay warqadii uga timi Xeer Ilaalinta Puntland u gudbiyeen guddiga Sharuucda & Anshaxa ee baarlamaanka, si […]
Generaal Diyaano oo ka farxiyey dadka Baladweyne & Madaxda Puntland oo ka aamusan xaalada G. Hiiraan
BOOSAASO(P-TIMES) -Generaal Asad Cismaan Cabdullaani (Diyaano) oo ahaa Agaasimihii hore ee ciidamada La dagaalanka Argagixisada iyo difaaca Puntland ee loo yaqaano PSF ayaa ku dhawaaqay in uu shacabka magaalada Baladweyne ee gobalka Hiiraan la qeybsanayo […]